I-TSCM, umthengisi we-Apple, uya kwakha ukuya kwiinkxaso-mali ezi-6 eArizona (USA) | Ndisuka mac
Uyilo lwekhontrakthi ye-semiconductor yamazwe ngamazwe yaseTaiwan kunye nenkampani yokuvelisa, njengenye yeenkampani ezinkulu eTaiwan kwaye yenye yezona zixabisekileyo emhlabeni, iya kwakha iifektri ezintsha eArizona. I-TSCM sele ibhengeze kunyaka ophelileyo ukuba ifuna ukuzinza kwi-Grand Canyon State. Kodwa iingxelo ezintsha zibonisa ukuba ayizukuba yinkxaso-mali eza kwenziwa kuphela kodwa kuya kuthethwa ngayo ukuya kuthi ga kwisithandathu.
Ngokweengxelo, el I-Apple's M kunye noluhlu lwe-TSMC chip maker iceba ukwakha ngaphezulu kwefektri ebhengeziweyo e-United States. Ngokukodwa kwisixeko saseColorado Canyon, eArizona. Ngo-Meyi ka-2020 kwathiwa inkampani izokwakha i-12.000 yezigidigidi kumzi-mveliso. Indawo kulindeleke ukuba iqale ngokuvelisa umthamo ngo-2024.
Imithombo emithathu eqhelene nalomba, othe wathetha ngombandela wokungachazwa nanjengoko bengagunyaziswanga ukuba bathethe noonondaba, baxelele iReuters ukuba ukuya kuthi ga kwimizi-mveliso emihlanu kucwangcisiwe. Akucaci ukuba loluphi uhlobo olongezelelekileyo lwemveliso kunye notyalo mali Banokumela la mafektri ongezelelweyo kwaye yeyiphi itekhnoloji yokwenza chip abanokuyisebenzisa. I-TSMC yatsho kwinyanga ephelileyo ukuba icwangcise ukutyala imali eyi-100.000 yezigidigidi kule minyaka mithathu izayo ukwandisa amandla emveliso, nangona ingakhange inike zinkcukacha.
Ukujonga ukunqongophala kwe-chip ukuba iinkampani zetekhnoloji zinayo ngoku, ezi ndaba ziluncedo. Ngokucacileyo hayi ngalo mzuzu uthile, kodwa iziganeko ezifanayo ezizayo kwinto eyenzekayo ngoku. I-Apple izakuxhamla kakhulu ekubeni nemveliso ye-chip isondele kakhulu kwaye iya kuba nakho ukunciphisa iindleko ezininzi.
Gcina ukhumbula ukuba urhulumente we-Biden ulungiselela ukuchitha amashumi ezigidi zeedola ukuxhasa ukwenziwa chips zasekhaya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-TSCM, umthengisi we-Apple, uya kwakha ukuya kwiinkxaso-mali ezi-6 eArizona (USA)